China Weeton 823A / 828B abụọ-akụrụngwa Pu mgbanwe nkwakọ nrapado emepụta na suppliers | Huitian
Weeton 823A / 828B Abụọ-akụrụngwa Pu mgbanwe nkwakọ nrapado
Enwere ike ịhazi usoro ngwakọta n'etiti 100: 50-60 dịka ọnọdụ ọrụ akọwapụtara.
823A / 828B anaghị emetụta oghere nke ihe nkiri dị n'ime mgbe emechara. Mgbe ọ gwọchara, nrapado ahụ bụ transperent, enweghị ụtọ, na-agbanwe na ịka nká.
Ndụ magburu onwe ya: mgbe agwakọtara ihe abụọ ahụ, oge ndụ nwere ike iru 40 nkeji, nke gosipụtara arụmọrụ kacha mma.
Ọgwụgwọ ngwa ngwa: N'okpuru ọnọdụ 35 ℃ ruo 45 ℃, enwere ike gwọọ ngwaahịa ahụ kpamkpam mgbe ụbọchị 1-2 gasịrị. Maka ngwugwu nkwakọ ngwaahịa ihe mkpuchi atọ, nke atọ nke ihe nkiri ga-agbakwunye mgbe awa 12 gachara lamination abụọ.
Eva Hot gbazee nrapado
Hot gbazee nrapado ntụ ntụ